स्याउ पुराना: ग्रेड, सुविधा र समीक्षा
स्याउको रूख - यो शायद सबै भन्दा हाम्रो देश, फल बाली को एक किसिम मा साधारण छ। यी रूखहरू लगभग सबै vacationers बढ्न। स्याउ को फल ताजा र प्रक्रिया मा खाएको गर्न सकिन्छ। यो बाली धेरै किसिमहरु देखिन्छ। गर्मी, जाडो र शरद ऋतु: र ती सबै तीन मुख्य प्रकार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो समूह मीठो र सुगन्धित प्रारम्भिक स्याउ छन्। यो प्रजाति को किसिमहरु मा परिपक्व रूसी संघ को बीचमा सडक खण्ड मध्य-सेप्टेम्बर - लेट जुलाई मा।
सबै भन्दा लोकप्रिय गर्मी स्याउ
यो परम्परागत बगैचा संस्कृति को प्रारम्भिक प्रजातिहरू विशेष vacationers द्वारा सराहना। यी फल हुनत, यदि चाहेको, को जाडो को प्रक्रिया को लागि सहित, तिनीहरूलाई को भन्दा अझै ताजा खान्छन् प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा सुखा सामान थपियो।
को युक्रेन, बेलारुस र रसियामा पनि उब्जाउ स्याउ को सबै भन्दा प्रारम्भिक प्रजातिहरू, यो छ:
यी सबै स्याउ लेट जुलाई मा पकाना। आफ्नो विशिष्ट सुविधाहरू राम्रो छाडा र रसदार मासु शरद ऋतु र जाडो प्रजातिहरू, स्वाद संग तुलना, धेरै कोमल छ।
अगस्ट प्रारम्भिक मा, माली लोकप्रिय Papirovka र सेतो भर्ने बाली। लेट गर्मी र प्रारम्भिक स्याउ पनि छन्। प्रजातिहरू Melba र Dzhuli रातो, उदाहरणका लागि, बाली काट्ने कहीं सेप्टेम्बर को बीचमा दिनुहोस्।
स्याउ पेड बन्द: विवरण र समीक्षा
बगैंचामा यो किसिम को फल धेरै पहिले पकाना। यो जुलाई को अन्त मा हुन्छ। स्याउ बन्द को लाभ, earliness बाहेक, गर्मी बासिन्दा समावेश:
फल को आकर्षक उपस्थिति।
स्याउ ग्रेड बन्द औसत मूल्य फरक र okruglokonicheskuyu आकार (माथि एक ribbing संग) छ। यी फल को कोटिंग एक विस्तृत गाढा ऐंसेलु रातो संग पहेलो मलाईदार छन्। शरीरका तिनीहरूले मध्यम घनत्व र रक्सी-मीठा स्वाद (खट्टे) हो सेतो छ। स्याउ दुर्भाग्यवश, समीक्षा truckers द्वारा न्याय, यो धेरै असमान छ, प्रारम्भिक यी पकाना, तर। नै यस किसिम को छ रूख एक शानदार बाक्लो मुकुट छ।
राम्रो समीक्षा माली स्याउ बन्द बस मात्र पहिले पकने र राम्रो transportability लागि मूलतः कमाए। यो क्रमबद्ध को बेफाइदा माली उच्च उपज र अपेक्षाकृत कम hardiness पनि समावेश।
यो विविधता विशेष गरी द्रोही गर्न प्रतिरोध र धेरै कठोर frosts गर्न हानि बिना सहन क्षमता लागि माली मूल्यांकन गर्छन्। स्याउ harvests प्रारम्भिक मिठाई दिने 3-4 वर्ष मा रोपण पछि सुरु हुन्छ। आफ्नो सानो फल - 90-100 जी, एक सपाट-गोलो आकार छ। यो हल्का पहेंलो र सेतो मज्जा र धेरै गुलियो मा स्याउ बोक्रा। तसर्थ, वास्तवमा, प्रजाति को नाम।
प्रारम्भिक मीठो स्याउ प्रजातिहरू stunted फरक। Crohn आफ्नो चिटिक्क, सघन, सपाट-राउण्ड।
स्याउ Elena समीक्षा
यो लोकप्रिय विविधता बेलारुस मा आफ्नो सानो (120-150 G) को 2001. फल, सपाट-राउन्ड नस्ल थियो। रंग स्याउ Elena हल्का हरियो, धमिलो उज्ज्वल क्रिमसन शरमाना हुनुहुन्छ। को मज्जा सेतो, मध्यम-घनत्व, ठीक-अन्न संरचना फरक छ छ।
राम्रो समीक्षा माली अरू सबै कुरा संग, यो पनि एक धेरै सुखद सुगन्ध छ, फल को मुख्य अमिलो-मीठा र नाजुक स्वाद यो ग्रेड दिनुपर्छ। Elena अगस्ट को दोस्रो दशक गर्न लेट जुन देखि स्याउ परिपक्व। Fruiting रोपण को 2-3 वर्ष मा सुरु हुन्छ। यो किसिम को पनि अग्लो रूखहरू बढ्न गर्दैन। Crohn तिनीहरूले अलिकति उच्च pyramidal, गोलाकार srednezaguschennaya।
यो बेफाइदा स्याउ Elena को माली द्रोही र उपज गर्न भीड झुकाव छैन पनि उच्च प्रतिरोध समावेश गर्नुहोस्। यो विविधता हेरचाह, अन्य कुराहरु, जस्तै नियमित Thinning ovaries रूपमा प्रक्रिया समावेश छ।
Papirovka र सेतो भर्ने: विवरण
यी दुई प्रजाति - सायद सबैभन्दा, रूसी बेलारूसी र युक्रेनी truckers प्रारम्भिक स्याउ लोकप्रिय। प्रजातिहरू Papirovka र सेतो भर्ने को XIX सताब्दी को अन्त मा फिर्ता लिया थिए। जैविक विशेषताहरु लगभग समान छ। धेरै वैज्ञानिकहरू-प्रजनकों पनि यो एक र एउटै प्रकारको छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तथापि, प्रायजसो, जीवशास्त्रीहरूको यी दुई प्रकारका बीच गौरव अझै आयोजित। बीच केही मतभेद छन् भन्ने तथ्यलाई। त्यसैले, उदाहरणका लागि, सेतो भर्ने को फल छैन विशिष्ट Papirovka बीचमा seams उच्चारण छ। साथै, यी स्याउ र दस दिन पछि परिपक्व - अगस्ट पहिलो दशक को अन्त मा।
आफ्नो उत्कृष्ट परिणाम मुख्यतया माली यी किसिमका मूल्यांकन गर्छौं। स्याउ को प्रकाश मज्जा धेरै मीठो स्वाद, एक भद्दा संरचना र धेरै रमाइलो र बलियो सुगन्ध छ। यी सफेद, हात्तीदाँतको फल को छाला को रंग। आयाम तिनीहरूले ठूलो - Elena, Papirovka र सेतो जस्तै 150-170 ग्राम बाली काट्ने अधिभार खतरा भर्नु। दुवै प्रजातिहरू को fruition रोपण पछि 4-5 वर्ष आउँछन्। पहिलो पटक, स्याउ रूखहरू धेरै ठूलो फल उत्पादन, तर सानो परिमाणमा।
यी दुई ग्रेड shirokopiramidalnaya मा Crohn रूखहरू। उमेर संग, यो बिस्तारै राउण्ड हुन्छ। सेतो भर्ने र मध्यम उच्च Papirovka प्रजातिहरू को एक समूह हो। माली फोरम यी दुई प्रजातिहरू बारेमा खराब समीक्षा व्यावहारिक उत्पन्न गर्दैन।
स्याउ को यो किसिम को फल पनि लेट जुलाई मा पकाना। यो रोचक प्रजाति प्रदर्शित चेक गणतन्त्र थियो। रातो स्याउ जुली सम्पूर्ण सतह माथि क्रिमसन रंग संग एक हल्का हरियो रंग छ। आयाम एक बरु ठूलो (160 ग्राम), र thickened, गोलाकार-चोटीदार को फारम छ। फल को स्वाद, धनी मीठा छन्। यसको विशेषताहरु अनुसार Dzhuli लाल सबै माली Melbu पोस्ट-सोभियत अन्तरिक्ष गर्न चिरपरिचित को कडा reminiscent छ, जो विवरण तल दिइनेछ।
स्याउ लाल को प्रारम्भिक प्रजातिहरू: निर्दिष्टीकरण
यो विविधता NIIP तिनीहरूलाई नस्ल गरिएको छ। आई वी Michurina र केन्द्रीय काला धरती क्षेत्रका लागि zoned। रातो स्याउ प्रजातिहरू प्रारम्भिक कम बढ्न र फल एक बरु साना (90-120 G) छ। परिपक्वता को एक चरण मा रंग स्याउ उज्ज्वल ऐंसेलु गुलाबी संग पहेलो फिक्का छन्। फल क्रीम, मध्यम घनत्व, रसदार देखि मज्जा। उनको सुखद अमिलो-मीठा, मिठाई को स्वाद।
Melba: राय माली
साथै Papirovka र सेतो भर्ने मा, त्यहाँ, प्रारम्भिक पकने स्याउ को अन्य किसिमहरु लगभग सबै cottagers गर्न परिचित छन्। ती, उदाहरणका लागि, Melbu समावेश गर्नुहोस्। यो लोकप्रिय किसिम, यसको लाभ माली विशेष गरी राम्रो पैदावार र फल को उत्कृष्ट transportability (प्रारम्भिक maturing प्रजातिहरू लागि rarity छ) समावेश 1889. क्यानाडा मा शुरू भएको थियो, माली को राम्रो समीक्षा धेरै कमाएका छन्।
Melba भण्डारण स्याउ पनि धेरै लामो हो। धेरै माली आफ्नो greenish बांधन र फ्रिज मा राख्नु गर्न सल्लाह छन्। स्याउ को यो किसिम को फल को भण्डारण यो विधि संग जनवरी गर्न ताजा रहन सक्छ।
रंग स्याउ Melba रातो एउटा हल्का हरियो स्ट्रिप छ। आफ्नो प्यारो मज्जा फरक विशेषता कफी सुगन्ध। अनावश्यक रूख प्रजातिहरू Melba srednerosloe, एकदम चिटिक्क गोलाकार मुकुट खेल्छ। को fruiting समयमा स्याउ रूखहरू रोपण पछि 4-5 वर्ष लाग्न। विविधता सकारात्मक विशेषताहरु, अन्य कुराहरु, माली द्रोही र एकदम सजिलै कम तापमान बोक्न सक्ने क्षमता प्रतिरोध समावेश गर्नुहोस्।
स्याउ को एक प्रारम्भिक प्रजातिहरू के खाना पकाउनु?
बागवानी बाली को गर्मी विविधता फल सामान्यतया धेरै नाजुक स्वाद छ। त्यसकारण, तिनीहरूले अक्सर गर्मी Pies, केक, Pies, compotes को तयारी को लागि प्रयोग गरिन्छ। उत्तरार्द्ध मामला मा, फल सामान्यतया जामुन (संग अक्सर raspberries र currants) संग पैन मा राख्नु छन्।
स्याउ Pies देखि लोकप्रिय शायद पाइ छ। यो दृढ शरीरमा संग अमिलो फल अनुकूल लागि (तपाईं पनि एक सानो अपरिपक्व लाग्न सक्छ)। यो केक लागि आटा सामान्यतया 2-5 कुटपिट अन्डा, 1 Tbsp देखि तयार छ। चिनी र 1 Tbsp। पीठो। यसलाई मा शान लागि एक सानो बेकिंग पाउडर र स्टार्च थप्नुहोस्। नपाकेको स्याउ पूर्व-कट चीनी को एक सानो राशि खन्याउन र 20-30 मिनेट लागि ओवन मा 10 मिनेट Bake स्याउ पाइ incubated।
को जाडो लागि विधिहरू प्रक्रिया
यसरी, स्याउ को प्रारम्भिक maturing प्रजातिहरू साधारण ताजा प्रयोग गर्नुहोस्। शरद ऋतु प्रजातिहरू फलको संरक्षण को लागि सबै भन्दा सामान्यतः प्रयोग गरिन्छ। प्रायजसो उपचार बिना नै भण्डारणमा, स्याउ को कुनै पनि लेट वा प्रारम्भिक जाडो क्रमबद्ध राख्नु। एक सुन्दर ठाउँमा यस्तो फल अर्को वर्ष को अप्रिल-मे सम्म झूठ गर्न सक्नुहुन्छ।
तर, बगैचा, उदाहरणका लागि, नयाँ, र यो मात्र स्याउ को गर्मी प्रजातिहरू सम्म बढ्नेछ भने, पाठ्यक्रम, को जाडो लागि तयारी आफ्नो फल देखि गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, स्याउ को एक धेरै स्वादिष्ट जाम प्रारम्भिक प्रजातिहरू यस नुस्खा लागि तयार छन्:
परिपक्व फल धोए हुनुपर्छ, कोर हटाइएको र स्लाइस तिनीहरूलाई काट।
यसरी तयार स्याउ चीनी संग भर्न र एक सानो साइट्रिक एसिड थप्न आवश्यक छ।
खाना पकाउने फल घण्टा लगभग दुई हुनुपर्छ। स्याउ को 1 किलो चिनी2किलो र 1 घण्टा लिन। एल साइट्रिक एसिड। जाम स्टोभ मा तयार छ, जबकि, तपाईं बैंकहरू (0.5-1 लिटर) को लागि यो तयार गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले राम्ररी धोएर र सुकेको हुनुपर्छ। तयार बनाएको जाम तल बंधक बैंकहरू cooled र kapron Lids ढाकिएको।
को हिउँदमा स्वादिष्ट compote - यो पनि जो प्रारम्भिक स्याउ प्रयोग गर्न सकिन्छ तयारीको लागि हो। अमिलो मज्जा संग प्रजातिहरू ठीक यस उद्देश्यका लागि अनुकूल।
फल compote खाना पकाउने समयमा उनीहरूले seethe छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। आखिर, प्रायजसो प्रारम्भिक प्रजातिहरू को स्याउ को शरीर मा छैन पनि बाक्लो छ। निम्नानुसार जस्तै फल जाडो compote बनाउन:
स्याउ तिनीहरूले कोर हटाइएको र आधा कटौती गर्दै छन्, धोए छन्।
यो तयार फल 20-30 मिनेट (अब असम्भव राख्न) को लागि एक थोडा नुनीन वा acidified चिसो पानी मा राखिएको छ।
राम्ररी धोएर र तीन-लीटर जार संग scalded।
तिनीहरूलाई स्याउ बिछाउने र तातो तरल सिरप (पानी लीटर 250-300 ग्राम चिनी प्रति 1) मा खन्याउन।
सिरप 5-7 मिनेट लागि बैंक मा राखिएको र यो पैन फिर्ता पोखे।
फेरि यो फेरि एक फोडा ल्याइएको र जार मा हालिएको छ।
तयार compote धातु ढक्कन रोल।
तातो compote संग जार, यो पछि thawed छैन भनेर क्रममा, तपाईं न्यानो ठाउँमा ढक्कन तल राख्नुपर्छ, एक मोटी कम्बल र्याप। यस्तो compote मा कोठा तापमान तल शांत। यसबाहेक, यो एक कोठरी वा तहखाने मा भण्डारण गर्नुपर्छ।
तसर्थ, हामी, विस्तृत जांच स्याउ (नाम र फोटो संग) को प्रारम्भिक प्रजातिहरू के हुन्। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो संस्कृति को गर्मी प्रजातिहरू राम्रो उपज र फल को एक उत्कृष्ट स्वाद द्वारा विशेषता छन्। उत्तरार्द्ध ताजा र समर्थित रूपमा खाना प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती स्याउ र खाना पकाउने पाक लागि पूर्ण।
नासपाती पसंदीदा: विविधता को विवरण
ब्ल्याकबेरी: रोपण र मर्मतका, गुणन ब्ल्याकबेरी cuttings, layering। प्रजनन ब्ल्याकबेरी besshipnoy
रूखहरू नवोदित। सुझाव माली
सुनगाभाहरू कम्ब्रिया - मानव हात को एक सुन्दर सिर्जना
र कसरी जब सुनगाभा प्रत्यारोपण गर्न?
पहाड पाइन Pumilio: रोपण र हेरविचार, विशेष बढ्दै
बर्न चलचित्र - एक सीआईए superspy मताधिकार
रेलिंगहरुको। उद्देश्य र रेलिंगहरुको को प्रकार
वाशिंगटन सम्मेलन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन उनको अपनाए
रूस मा राष्ट्रिय प्रश्न
खेल र आईएल 18 शिकार लागि सबै भन्दा राम्रो हतियार
गर्भावस्था मौखिक सेक्स को समयमा उत्पन्न हुन सक्छ?
मान phraseologism र उपयोग को उदाहरण: समय भएकोमा
कुकुर को सपना किन मारे? सपना पुस्तक भन्नेछु!
यो अचम्मको छ, तर त्यहाँ व्यावहारिक कुनै भ्रष्टाचार छ देशहरूमा छन्